FITATERAM-BAHOAKA :: Mitohy ny fampiakarana ny saran-dalana • AoRaha
FITATERAM-BAHOAKA Mitohy ny fampiakarana ny saran-dalana
Kaoperativa roa hafa indray no hanampy ireo namany hampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary. Manomboka ny 15 desambra ho avy izao izany ho an’ireo ao amin’ny kaoperativa Tselatra raha voalaza fa ny 10 desambra kosa ho an’ny kaoperativa Cotral.
“Ny tompon’andraikitra eo anivon’ny vondron’ny kaoperativan’ny mpitatitra eto an-drenivohitra na UCTU no manapaka ny tokony hiakaran’ny saran-dalana. Tafiditra ao anatiny ihany koa ny fiakaran’ny vidin’ny solika 50 ariary isaky ny litatra no voalaza”, hoy ny mpamily iray eo anivon’ny kaoperativa Cotral. Ity kaoperativa ity izay ahitana ny zotra 129 mampitohy an’Ambohipo amin’Analakely. Eo ihany koa ny zotra 017 izay mitatitra ireo mpanjifa avy eny Ambohipo mankany Mahamasina.
Toy izay ihany koa ny antony ho an’ny kaoperativa Tselatra ahitana ny zotra 146,147, 147 D ary ny 178. Mbola manome fe-potoana hiomanan’ny mpanjifa, araka izany, ireo mpitatitra milaza fa hampi- akatra saran-dalana ireo.
Tsiahivina fa tsy nandray saran-dalana tsy feno intsony ny kaoperativa Tselatra taorian’ny fitazonan’izy ireo ny saran-dalana tokana 400 ariary. Mbola nanaiky ny saran-dalana tsy feno kosa ny zotra Cotral sasantsasany.
Na izany aza, maro ireo mbola tsy mankasitraka izany fiakaran’ny saran-dalana izany. “Efa zatra ny saran-dalana tokana 400ariary izahay. Tokony tsy hiova intsony satria tsapanay fa sady mahazo tombony ireo mpitatitra noho ny tsy fisian’ny tapa-dalana intsony. Na izany aza, tsy maintsy manaraka izay fandaminana izahay mpandeha”, hoy i Lalao, mponina eny Ambatomaro manjifa ny zotra 147 ao amin’ny kaoperativa Tselatra. Ankoatra ireo efa voalaza ireo, mbola misy ihany ny zotra tsy mbola nanapa-kevitra ny hampiakatra ny saran-dalana 500 ariary.